सलमानसँग बाँधिदैछ साराको जोडी ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
सलमानसँग बाँधिदैछ साराको जोडी ?
By Digital Khabar Last updated Dec 3, 201940
अभिनेता सलमान खान अहिले आफ्नो बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘दंबग ३’ को प्रचारमा व्यस्त छन् । यसमा उनीसँगै सई मन्जरेकर, सोनाक्षी सिन्हा, किच्चा सुदीपलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । यो फिल्मको अघिल्ला दुबै श्रृंखला सुपरहिट भएका थिए ।
तेस्रो श्रृंखलालाई पनि रिलिज अगावै सुपरहिट भनिन थालिएको छ । चर्चित कोरियोग्राफर प्रभु देवा यसका निर्देशक हुन् । सलमान ‘दंबग ३’ को प्रमोशनसँगै अर्को वर्ष प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘राधे : योर मोस्ट वान्टेड भाई’ को छायांकनमा पनि व्यस्त छन् ।
प्रभु देवाकै निर्देशनमा बनिरहेको फिल्ममा सलमानको जोडी अभिनेत्री दिशा पाटनीसँग बाँधिएको छ । यसअघि यी दुईले फिल्म ‘भारत’ मा सँगै काम गरेका थिए । सोहेल खानको निर्माणमा बन्ने फिल्ममा ज्याकी श्राफ र रणदीप हुड्डा पनि छन् । यसबीच, अभिनेता सलमान खानलाई गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जीरो’ का निर्देशक आनन्द एल रायले फिल्म अफर गरेका छन् । उनले आफ्नो नयाँ फिल्ममा अभिनेतामा सलमान र अभिनेत्रीमा सारा अली खानलाई लिन चाहेको जानकारी प्राप्त छ ।
बलिउडमा प्रवेश गरेसँगै ठूला स्टारसँग काम गर्ने अवसर पाएकी साराले आफूलाई सलमान खानको ठूलो फ्यान बताउने गर्छिन् । निर्देशक राय आफ्नो नयाँ फिल्म सलमानले खेल्न तयार भए अभिनेत्रीमा सारालाई लिने सोचमा छन् । सारा ती अभिनेत्रीमा पर्छिन्, जो निर्देशकसँग भेटेर काम माग्न हिचकिचाउँदिनन् ।
उनीसँग एक फिल्ममेकरको लिस्ट छ, जोसँग उनी काम गर्न चाहन्छिन् । यो लिस्टमा सबैभन्दा टपमा आनन्दको नाम छ । अहिलेसम्म आनन्दको फिल्म गर्ने विषयमा सलमानले कुनै निधो गरेका छैनन् ।
१३ औँ साग: नेपालको शानदार सुरुवात, भुटानविरुद्ध गोलवर्षा